Sergio Ramírez, onyinye ọhụrụ Cervantes. Atọ n'ime akwụkwọ ya. | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Mariola Diaz-Cano Arevalo | | Asọmpi na Awards, Ndị edemede, Akwụkwọ
Onye edemede Nicaraguan Sergio Ramirez abụrụla onye mmeri afọ a nke onyinye kachasị elu maka mkpụrụedemede Spanish, the Cervantes Nrite, nke enyere ụnyaahụ, Day Book, in Alcala de Henares. Site na ọtụtụ akwụkwọ edemede, Sergio Ramírez, 75, bụ ode akwukwo, ode akwukwo, ode akwukwo na odeakụkọ. Ọ mekwara a ọrụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị siri ike ma bụrụ osote onye isi ala Nicaragua site na 1985 ruo 1990. N’ọnwa Nọvemba gara aga, ndị juri duziri onye isi nduzi nke Royal Spanish Academy, kpebiri inye ya onyinye kasị ùgwù nke akwụkwọ ozi Spanish.
M pụta ìhè n'isiokwu a atọ n'ime akwụkwọ ya. Uno nwere akara ụda olu na ncheta ọchịchị nke obodo gi na abụọ ojii ojii agụụ na-agụ ya onye nyocha Dolores Morales. Mana enwere ọtụtụ ndị ọzọ.
1 Bye ụmụ okorobịa
2 Eluigwe na-ebe akwa
3 Onweghizi onye na ebe akwa m
4 Aha ndị ọzọ
Bye ụmụ okorobịa
Ramírez bụ oke akaebe nke Sandinista Revolution na, dika m kwuworo, o jere ozi dika osote onye isi ala n'oge oge nke Daniel Ortega. Na mmeri na nhoputa ndi ochichi na 1990 usoro mgbanwe nke mba ahụ kwụsịrị olile-anya na mgbanwe agakwaghị adị. N’ime akwukwo a, ode akwukwo chikọtara icheta otu ọgbọ onye lụrụ ọgụ maka ọchịchị onye kwuo uche ya na ikpe nkwụmọtọ na Nicaragua mgbe ọ hụrụ ka esi hapụ ọrụ mmezigharị ndọrọ ndọrọ ọchịchị ya.
Eluigwe na-ebe akwa
Sergio Ramírez azụlitewokwa akwụkwọ nyocha na nke a bụ nke mbụ aha starring nyocha Dolores Morales. E bipụtara ya na 2008 na n’ime ya onye edemede dere a ụwa jupụtara narcos, mpụ, nrụrụ aka na iji ike eme ihe n'ụzọ na-ezighị ezi. Ndị protagonists bụ abụọ ndị bụbu ndị agha okpuru na ndị otu Ngalaba Ndị uwe ojii Nicaraguan nke Ọgwụ Narcotics, onye nyocha Morales na osote onye nyocha Dixon.
Ha ga-abụ ndị na-enyocha ihe efu efu nke nwanyi. Naanị ihe ha ga-eme bụ ụgbọ mmiri gbahapụrụ ma na-enyo enyo maka ibufe ọgwụ, a akwukwo gbara ọkụ na a uwe elu ọbara. Ma ikpe ahụ ga-akawanye njọ mgbe ọdịdị nke ozu di iche iche, gụnyere nke onye akaebe gbara ọkpụrụkpụ.
Akụkọ a edoziri na a Managua chaotic na ọkụ, ebe ndị protagonists abụọ ahụ ji obi ike na ọchị na-ebuso ndị dị ize ndụ agha Cali na Sinaola cartels. Ma ha na ndị otu ibe ha ga-alụ ọgụ na nnupụisi ahụ nke duhiere echiche ochie ha. Abụ na esemokwu na asusu, Ramírez na-enye anyị ọhụụ acid nke ọha mmadụ nke ndị ike nke ọma nwekwara ike ịbụ mgbe ụfọdụ ike ọjọọ.
Onweghizi onye na ebe akwa m
Bipụtara afọ gara aga, anyị na-ezute ọzọ na Onye Nlekọta Moleles. Ma ọ na-atara na Ndị uwe ojii mba ruo ọtụtụ afọ ma na-arụ ọrụ ugbu a onye ọrụ nyocha nyochaa ịkwa iko nke ndị ahịa dị ala. Enwere ụlọ ọrụ na ụlọ ahịa gbadata ọzọ Managua. Mgbe ahụ ihe omume a na-atụghị anya ya ga-eme ka ị kwụsị ọrụ ị na-eme. Ọ bụ ihe gbasara efu efu nke nwa nwa otu n'ime ndị nwoke kachasị ike na mba Morales nyere ọrụ ịchọta ya.
Ma oge na-adịghị anya nke nwa agbọghọ ahụ ghọrọ isi mmiri kpụkọrọ akpụkọ nke zoro nsị mmiri nke usoro ọchịchị na mmekọrịta mmadụ na mba. Yabụ, Morales ghọtara na ihe ọ ga-achọpụta abụghị naanị ebe nwa agbọghọ nọ, kama ọ bụ ezigbo ihe kpatara ya kedu ihe n'azụ efu.
Ramírez na-ejikwa njikwa ya pụrụ iche ọchị na na-atụgharị uche, na mgbakwunye na njide akụkọ ya nke na-egosipụta ọrụ ya. Ọzọkwa anyị na-achọta sexo, ego, nrụrụ aka na nkata nke ike dị ka mkpịsị ugodi nke ikpe a nke na ọ dịghị onye ọ bụla zuru oke.
Ọbara ahụ ọ tụrụ gị ụjọ?
Egwuregwu zuru oke
Margarita, oké osimiri mara mma
Otu puku na otu ọnwụ
Ntaramahụhụ sitere n'aka Chineke
Onye gbara ọsọ
Ochie ochie nka
Apple Apple: Akwụkwọ edemede na Akwụkwọ
Akụkọ ndị a ga-agwa
Osisi gbara ọchịchịrị
Dawn ọla edo: Akụkọ ndụ nke Nicaragua
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Asọmpi na Awards » Sergio Ramírez, onyinye ọhụrụ Cervantes. Atọ n'ime akwụkwọ ya.